အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတတ်ကျွမ်းလိုသော် (၁၃) – ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတတ်ကျွမ်းလိုသော် (၁၃) – ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့်
အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတတ်ကျွမ်းလိုသော် (၁၃) – ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့်
Posted by kai on Apr 28, 2017 in Contributor, Columnist, Education, Literature/Books, Myanmar Gazette |5comments
အရင်လက Conditional Clause လေးတွေအကြေင်း အတော်လေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ယခုလမှာတော့ စကားပြောသည့်အခါဖြစ်စေ၊ စာရေးသည့်အခါ၌ဖြစ်စေ တော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ Adjective Clause လေးတွေ အကြောင်းဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Adjective Clause ဆိုတော့ adjective တွေရဲ့ ၀သီအတိုင်း Noun ကို အထူးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၀ါကျတစ်ခုမှာ adj clause ကို နှစ်နေရာမှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး နေရာကတော့ subject ကတ္တားရဲ့ အနောက်ဘက်မှာကပ်လျက်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ –
“The man who works for my dad lives in San Jose”
Who works for my dad = adjective clause
အထက်ဖော်ပြပါ ၀ါကျမှာ Who works for my dad ဆိုတဲ့ adjective clause လေးကို the man ဆိုတဲ့ subject ကတ္တားရဲ့ နောက်မှာကပ်လျက်တွေ့ရှိရပါတယ်။ အဲဒီ adjective clause ကို ဒုတိယအနေနဲ့ object ကတ္တားရဲ့ နောက်မှာလည်း တွေ့ရှိတတ်ပါသေးတယ်။
ဥပမာ – “I don’t like the man who works for my dad”
အထက်ပါ ၀ါကျမှာ who works for my dad ဆိုတဲ့ adjective clause လေးကို the man ဆိုတဲ့ object လေးရဲ့ နောက်မှာ ကပ်လျက်တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒီတော့ adjective clause လေးတွေကို ၀ါကျတစ်ခုမှာ ဘယ်နေရာမှာ ထည့်ပြီး သုံးရမလဲဆိုတာ သဘောပေါက်လောက်ပါပြီနော်။ ဒီတော့ adjective clause လေးတွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးရသလည်းဆိုတာကို နားလည်သွားအောင် ကြည့်ကြရအောင်။
adjective clause တိုင်းကို relative pronouns လေးတွေနဲ့ စရပါတယ်။ ဒီတော့ relative pronouns လေးတွေကို အရင်ဆုံးရင်းနှီးအောင် ကြည့်ထားဖို့လိုမှာပေါ့။
relative pronouns ၅ ခုကို အရင်ကြည့်ကြရအောင်။
who, whom, whose ကို လူနှင့်သာသုံးရပါသည်။
who —- subject ကတ္တားကို အစားထိုးပါသည်။
whom —- Object ကို အစားထိုးပါသည်။
whose — ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတဲ့ pronoun နာမ်စား (သို့မဟုတ်) noun နာမ်များကို အစားထိုးပါသည်။ object ကိုသော်လည်း၊ subject ကတ္တားကိုသော်လည်း အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
that ကို လူနှင့်ရော အရာဝတ္ထုများနှင့်ပါ သုံး၍ရပါသည်။ that နှင့် သုံးတာနှင့် which နှင့် သုံးခြင်း ဘယ်လိုခြားနားလည်းဆိုတာ နောက်လတွင် ရှင်းပြပါမည်။
တချိန်က ပညာရေးဝန်ကြီးအမည်ခံ စစ်သားတစ်ဦး that နှင့် which တို့၏ ကွာခြားမှုကို နားမလည်သဖြင့် တက္ကသိုလ်မှ ဆရာ၊ ဆရာမများကို မေးသည့်အခါ မဖြေနိုင်သူများကို နယ်သို့ ပို့ချပြီး ဖြေဆိုနိုင်သည့် ၎င်းနားလည်အောင် ရှင်းပြနိုင်သည့် စာရေးသူ၏ ဆရာကြီးတစ်ဦးကိုတော့ သဘောကျပြီး ရာထူးတောင် တိုးပေးလိုက်ပါသည်။ အော် ဒီစစ်အစိုးရ – တော်တော်ကို ကြောက်စရာကောင်းပါသည်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးနဲ့ အပြစ်ပေးတတ်သလို ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးနဲ့လည်း ရာထူးတိုးပေးတတ်ပါသည်။ လူခင်ရင် မူပြင်တယ်ပေါ့။ အခု democracy အစိုးရကတော့ ဒါမျိုးတွေမရှိတော့တာ တော်တော်လေးကို ဂုဏ်ယူစရာပါ။ relative pronouns လေးတွေကို သုံးတတ်လာအောင် ဖော်ပြပါ နမူနာလေးတွေ ကြည့်ပါ။
“The old man lives in Portland. He hasaPh.D. in Psychology”
“The old man who hasaPh.D. in Psychology lives in Portland.”
အထက်ပါ နမူနာ၌ ဒုတိယ၀ါကျ၏ subject ကတ္တား “he ” ကို “who” နှင့်အစားထိုးပြီး adjective clause လေးတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပါသည်။
Who hasaPh.D. in Psychology ဆိုသည့် “adj clause” လေးကို ပထမ၀ါကျရှိ The old man ၏ နောက်သို့ ပို့လိုက်သည်ကို သတိပြုမိပါစေ။ ဤသို့ဖြင့် ၀ါကျနှစ်ကို adjective clause သုံးပြီး ၀ါကျတစ်ခုတည်း ဖြစ်သွားစေပါသည်။ ၀ါကျနှစ်ခုနှင့်လည်း အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပါသည်။ သို့သော် ရုပ်ဆိုးနေသည့် ကားဟောင်းကြီးကို လှပသည့် Mercedes ကားသစ်လေးနှင့် လဲလိုက်သလို adjective clause လေးကို သုံးပြီး လှပတဲ့ ၀ါကျသစ်လေး ဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကဲ whom ကို သုံးစွဲပုံလေးကို ကြည့်ကြရအောင်။
“The old man lives in Portland. We know him asapsychiatrist”
“The old man whom we know asapsychiatrist lives in Portland.”
အထက်ပါ နမူနာ၌ whom သည် object him ကို အစားထိုးပါသည်။ သို့သော် him ၏ မူလနေရာ၌ whom ကို မထည့်ရသည်ကို သတိပြုမိပါစေ။ Relative pronouns တိုင်းကို clause ၏ အစ၌သာ ထည့်ရပါသည်။ whom we know asapsychiatrist ဆိုသည့် adjective clause လေးကို ပထမ၀ါကျ၏ the old man ၏ နောက်သို့ ပို့လိုက်သည့်အခါ ရုပ်ဆိုးနေသည့် ၀ါကျနှစ်ခုမှာ လှပချောမွေ့သည့် ၀ါကျလေးတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။ အလားတူပင် whose ကိုသုံးပြီး ၀ါကျနှစ်ခုကို တခုတည်းဖြစ်သွားအောင် ဖန်တီးနိုင်ပါသေးသည်။
“The general destroyed the country. His children stole from the hardworking people.”
“The general whose children stole from the hardworking people destroyed the country.”
အထက်ပါ နမူနာ၌ whose သည် နာမ်စား his ကိုအစားထိုးပါသည်။ whose children stole from the hardworking people ဆိုသည့်clause လေးကို ပထမ၀ါကျရှိ The general ရဲ့ နောက်ကိုပို့လိုက်သည့်အခါ အဓိပ္ပာယ်အလွန်ရှိသည့် ၀ါကျလေးတစ်ခုကို ရပါသည်။ ဘယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှင့် ဘယ်နိုင်ငံကိုဆိုလိုတာလည်းဆိုတာတော့ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်လေးသုံးပြီးသာ စဉ်းစားကြည့်ကြပါတော့။ အရာဝတ္ထုများနှင့် သုံးရတဲ့ which ကို သုံးတတ်အောင် ဖော်ပြပါ နမူနာလေးတွေကို ကြည့်ပါ။
“The house is on top of the hill. It belongs to the general”
“The house which belongs to the general is on top of the hill.”
“The house is on top of the hill. The general sold it toaforeign investor.”
“The house which the general sold it toaforeign investor is on top of the hill.”
အဲတိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေကို အိမ်တစ်လုံးလောက်ပဲ ရောင်းခဲ့တယ်ဆို တော်ပါသေးရဲ့။ အဲအခုတော့ တနိုင်ငံလုံးနီးနီး ကုန်ပါပြီနော်။ ထားပါတော့လေ။ ပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြီးခဲ့ပါပြီ။ နောက်လကြမှ Adjective clause လေးတွေ အကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်။
အခုနောက်ပိုင်း လေ့လာဖြစ်နေတာက အင်္ဂလိပ်စာ
သဒ္ဒါထက် . . .အပြော။
အပြောပိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေက သဒ္ဒါနည်းကျကျ တိတိကျကျကြီးလည်း မပြောကြတော့သလို သူတို့ကို သဒ္ဒါနည်းကျ မပြောတာတောင် နားလည်ပေးနေတာ တွေ့တော့. . .အလွတ်တန်း ပြောတာကြီးက အကျင့်ပါသွားမှာတောင် ကြောက်ရသေး။
US မှာရော သဒ္ဒါနည်းကျ အတိအကျ ပြောကြလားဗျ။
ဒါပေမယ့်ဘာသာရပ်တရပ်ကို စနစ်တကျလေ့လာချင်ရင်.. တတ်ချင်ရင်တော့.. သဒ္ဒါနည်းကျမှ..။
ဆိုတော့…. နလောက်ထဲမှာ…. သန်းတင်… တယ်မက်
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရမယ်ဆိုရင်4Skills လုံးကို အစကနေ အဆုံး ပြန်လည်ရတော့မှာဖြစ်နေတယ်။ ခုထိလည်း ရှေ့မရောက်ဘူး။ ဘယ်ကစပြီး ဘာကိုစလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ သဂျီးရေ အကြံဥာဏ်လေးပေးပါဦး။ အပြောကျတော့လည်း ခွေးအကြီး လှည်းနင်းနေတယ်။ အရေးကျတော့လည်း နကန်းတစ်လုံးမှမသိ၊ အဖတ်ကျတော့လည်း အဘိဓာန်လှန်နေရတယ်။ နားထောင်ကျတော့လည်း သုံးလေးခေါက် နားထောင်နေရတယ်။ ဟူး… ဥာဏ်ရည်ပဲ နိမ့်နေလို့လားမပြောတတ်တော့ဘူး။ တတ်ချင်တာလည်း နှစ်ယောက်မရှိဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အားမရဖြစ်နေမိတယ်။
Good and thank you. it is very helpful to me.